Iibhokisi zekhadibhodi yokutshiza i-Andreae iphepha lokucoca ipeyinti yokubamba ipeyinti yendawo yokutshiza - China yokutshiza ibhokisi yekhadibhodi Andreae iphepha lokucoca ipeyinti yokubamba isihluzi sendawo yokutshiza umthengisi, Ifektri -Shanghai Sffiltech Co., Ltd.
Ikhaya>iimveliso>Ukucoca uMoya woShishino>Icebo lokucoca ulwelo
Iibhokisi zekhadibhodi yokutshiza i-Andreae iphepha lokucoca ulwelo lwepeyinti yokubamba indawo yokufafaza
Imithombo yeendaba: izinto ezisekwe ephepheni ezingangeni manzi, kwimitha nganye yesikwere yokupeyinta amandla okufikelela kwi-15-25KG, eyi-3-5 amaxesha kunezinye izinto
I-din53438 Ukuma okungahambisani nomlilo: F1
Ipeyinti yephepha lokucoca
Imithombo yeendaba: Iphepha lokufaka + i-5mm ipholiyesta
Ukusebenza kweefilitha eziphezulu, kunye nokudodobala kwelangatye, anti-static
Iifilitha ezomileyo, ezaziwa njengephepha lokupeyinta lokupeyinta, isixhobo sokulinganisa i-paint (ibhodi yokucoca i-folding). Isetyenziselwa ukomisa igumbi lodidi olutsha lweemveliso ezinobume bemeko yendawo, isebenzisa isihluzi sokhuseleko lokusingqongileyo; Yenza ukuba ukutshiza / ukupeyinta kungabikho manzi, kungabikho ungcoliseko! Ndingayiphatha kakuhle ipeyinti, ioyile, izixhobo zeglasi, i-epoxy, tar, intsimbi uChristopher omde, ulwelo lomsebenzi womsebenzi, iplasitiki, udaka, udayi, ipeyinti, i-porcelain, njl njl. Iimfuneko kwindawo yokutshiza okanye ubumanzi obukhulu xa usebenzisa okungcono. Isihluzi esomileyo se-V singakwazi ukufunxa ngempumelelo ukutshiza okugqitha ngaphezulu, ngokunyanzelwa kwindlela yokutshintsha kokuhamba kwe-jet amaxesha amaninzi, ke oko kunobunzima kunokuba amasuntswana omoya aya kubambelela kumphezulu wephepha, hayi kude nokuhamba. Umxholo ogqitha kwiphepha leefilitha kwisibalo esivela ekugcwalisweni okuncinci, ukutshiza kude kube nokuvalwa okugcweleyo, izihluzi kufuneka zitshintshe! I-99.99 ukuya kwi-14 kg kwisikwekhilomitha ubuncinci ubuncinci sithwele ubunzima obuphindwe kathathu kuthi kahlanu kolunye uhlobo lwephepha lokuhlutha, kunye nobunzulu bokuthwala kunye nomhlaba wokuthwala
Ubungakanani: 10000mm + 1000mm + 60mm
Ukusebenza kwesihluzi: 90%
Isihluzo sokulayisha ubunzima: 18KG / sqm
Ukuphakamisa izinga lokuhamba: 0.25-1 M / S
Uxinzelelo olukhulu: 128-256pa
Isetyenziswe kakuhle kwipeyinti yokupeyinta yeenkuni, ifenitshala, imoto, izixhobo zegumbi namanye amagumbi okupeyinta njl.
Izinto eziphathekayo zifanelekile ukucoca i-particle eqinile okanye i-liquid ngexesha lokutshiza, lingasetyenziselwa ngokubanzi kwifayile yokupenda yeenkuni, ifenitshala, imoto, i-hardware kunye namanye amagumbi okupenda njl.
Ukuzibandakanya ekudaleni imeko-bume ecocekileyo nentsha yabantu, iSffiltech ikhethekileyo kwiphepha lokucoca ulwelo olomileyo. Njengomnye wabenzi nabathengisi ababalaseleyo, sinokuqinisekisa ukuba umgangatho ophezulu kunye nokusebenza okuzinzileyo kweemveliso zethu zesiko. Nceda uqiniseke ukuba uyayithenga.
Isihluzi seHumidifier Wick Isixhobo sokuTshintsha indawo yeHumidifier